WADANI MEDIA: Al-shabaab oo bilaabay hab cusub oo qaraxyada ku fuliyaan. Eeg faahfaahinta | Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/WADANI MEDIA: Al-shabaab oo bilaabay hab cusub oo qaraxyada ku fuliyaan. Eeg faahfaahinta
Breaking NewsSomali News
Al-shabaab oo bilaabay hab cusub oo qaraxyada ku fuliyaan.
Xarakada Al-shabaab oo mar waliba dagaal joogto kula jirto Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed iyo hawlgalka Midowga Africa ee AMISOM ayaa waxay mar waliba adeegsadaan xeellado kala duwan oo ay ku qarxiyaan Ummadda Soomaaliyeed. Al-shabaab ayaa ah cadawga ugu weyn ee mar waliba ku gumaada Ummadda Soomaaliyeed weeraro ismiidaamin ah iyagoo bartilmaameedsada meelo kala duwan sida hoteellada, maqaayadaha iyo xarrumaha dowladda.
Isbuucyadii ugu dambeeyey waxay Al-shabaab aad u adeegsanayeen xeellad ka duwan habkii hore ay u fulin jireen qaraxyada. Al-shabaab ayaa inta badan adeegsan jiray gawaari walxaha qarxa laga buuxiyey iyagoo ku qarxin jiray halka ay bartilmaameedsadaan.
Laakiin isbuucyadii ugu dambeeyey Xarakada Al-shabaab ayaa isticmaalayey shaqsiyaad naftood halige ah oo isku soo xeray walxaha qarxa ka dibna isku qarxiya bar-koontaroollada, hoteellada, masaajidada iyo xarrumaha dowladda. Tusaale ahaan, labadii dhacda ugu dambeeyey eeqaraxii 9-ka bishaan ka dhacay maqaayad ku taalla degmada Boondheere ee magaalada Muqdisho oo lagu dilay dad shacab, isla markaana lagu dhaawacay tiro kale iyo qarax maanta ka dhacay duhurnimadii Masjid ku yaalla Kismaayo oo qof naftii halige ah isku qarxiyey dad ka soo baxay sallaaddii Jimcaha.
Dhacdooyinkaan ayaa waxay muujinayaan in Al-shabaab ay adeegsanayaan xeellado cusub oo ay kula dagaallamaan shacabka Soomaaliyeed.
Sidoo kale, warar laga helayo ilo-ku-dhaw sirdoonka Soomaaliya ayaa sheegaya in Al-shabaab ay caasimadda Muqdisho ku soo deeyeen tiro dad naftood halige ah oo isku soo xeray walxaha qarxa kuwaas oo doonaya inay isku qarxiyaan shacabka Soomaaliyeed.
Lasoco wararka sirta iyo xaqiiqada ku saleysan ee Warbaahinta Wadani
Deg deg; Axmad Madoobe, oo Kismaanyo uduulay iyo waxa laga filan karo shirkii berri.
Bilow Keerow: “haddii Guddigii Jabuuti aysan arag Ciidanka Janan ee Mandheera deggan, dhogor ayey indhaha…
MW Farmaajo oo amray in Calanka hoos loo dhigo